Kismaayo News » Kismaayo iyo Guuxa dhismaha dawladda Jubaland
Kismaayo iyo Guuxa dhismaha dawladda Jubaland
Kn: Saddexdii sano ee u dambeysey waan kusoo noqnoqdey Kismaayo waxaana safarkaygii ugu dambeysey aan ku imid bishii April bilawgeedii sanadkan waa bil ka hor hadda. Marwalb oo aan Kismaayo imaadana waxaa amakaag igu reeba xawliga isbaddal ee ku socda dhanka dhismaha, amniga, dhaqaalaha, qaangaarnimada dawladda iyo muuqdheeraanta siyaasadeed ama biseylka sii kordhaya marwalba. Nadaamka iyo dawladda Jubaland amaan iyo bogaadin ayay mudan yihiin marka la eego duruufaha iyo xaaladda shaqo ee jirta iyo hormarka xawliga ah ee la gaaray. !
Ujeedkeygu ma ahan inaan arintaas hadda ka hadlo balse waxaan hadda maanta joogaa Kismaayo markale waxaana rabaa inaan akhirstayaasha la wadaago dareenka iyo guuxa Kismaayo ka abuuran ee saameynta ku leh dal iyo dibadba.
Waxaa shalay lagu dhawaaqey labada madaxweyne kuxigeen ee dawlad Goboleedka Jubaland waxaana karkaraya ama hadda bislaadey liiska xubnaha golaha wasiirada. Xantu way badan tahay malahuna waa dambi oo uma baahna in waxaan jirin la wareejiyo, balse waxaa hubaal ah in madaxwynuhu gacanta ku hayo dhismaha gole wasiiro oo leh tiro iyo tayo.
Soomaalidu inta badan waxey ku kala hormarto inta badan ma ahan XOG ay helaan oo dhab ah ee waa XANTA taasoo ay dadka qaar u fasirtaan XAN helaa Xog hela oo ah dhaqan aan wanaagsanayn. Xogta dhabta ah waa mid u baahan in la sugo waana mid imaaneysa dhakhso Insha Allah.
Nuxurka qormadeydu waxuu taabanayaa in shacabka Soomaaliyeed ay meelkasta oo ay joogaan ay dareemeen arkaana doorka Jubaland ka qaadaneyso soo nooleynta nabadda iy qaranimada Soomaaliyeed. Sidaas darteed rajada laga qabo madaxweyne Axmed iyo dawlad goboleedka Jubaland waa mid ka guda weyn shacabka daggan saddexdan gobol ee hadda ku baheysan maamulkan. Sidaas darteed waxaa loo baahan yahay in hamiga iyo yoolku fogaado oo uusan hoos usoo laabanin.
Qof illaahay uqorey kursi cidina kama celin karto sidoo kale nin aan loo qorina marna heli maayo. Mar haddii xaqiiqadu sidaas tahay geeddiguna uu beegsanayo meel durugsan waxaa loo baahan yahay in la sugo dawladda Jubaland oo dhameystiran lana soo dhaweeyo markey timaaddo. Hawsha taalla ayaa badan ninwalba muddo ayuu leeyahay waqtiguna waaba kooban yahey. Liis magacyo oo aan la qarin doonin oo banaanka imanaya inaan Xantiisa ku mashquulno micno badan ma lahan. Fadhiga halagu sugo hana loo duceeyo!
Tel-nadu ma yara, fariin qoraalka iyo hadal heynta ama af iyo dhaga isa saarkuna waa badan yahay. Balse waxaa xaqiiqo ah waxwalba oo la sameeyo qof illaahay u qoray ayunbaa heli doona kursigiisa. Sidaas darteed aan ka fariisano, madaxweynahana siino waqti golaha lasoo dhisana aan soo dhaweyno.
Hiigsigu waa horeeyaa wali, hana waarto Jubaland
WQ Axmed Daljire